12 Nzvimbo Dzinotonhorera MuEurope | Save A Train
musha > Travel Europe > 12 Nzvimbo Dzinotonhorera MuEurope
Rovedza Kufamba Britain, Train Travel Czech Republic, Chitima Kufamba Denmark, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Train Travel Holland, Chitima Kufamba Hungary, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba Russia, Chitima Kufamba Switzerland, Train Travel The Netherlands, Chitima Kufamba UK, Travel Europe
Kune akawanda maguta anoshamisa ekushanyira muEurope. Guta rega rega nemugwagwa zvine hunhu uye runako. Vibrant, izere nemakofi makuru, boutiques, mumigwagwa art, akaomesesa emifananidzo, uye eco-inoshamwaridzika, kana usati wave kune izvi 12 nzvimbo dzinotonhorera muEurope, heano zvikonzero zvishoma zvekuisa pasi bhaketi rako runyorwa.
1. Nzvimbo Dzinotonhorera MuEurope: Neukolln, Berlin
Kure nehukuru wokukwezva vashanyi muBerlin, iyo Neukolln nharaunda inzvimbo yega pachayo. Nharaunda inotonhorera musanganiswa pakati pekare nezvitsva, tsika, kuguta, nenzvimbo dzekutandarira dzakasvibirira.
Kababs, unyanzvi namaberere, matenga edenga padyo nemapaki egirini anoita kuti Neukolln nharaunda ive inotonhorera muEurope. Mushure mezuva rakakura kunze kweiyo huru Tempelhofer Feld, kana Britzer Bindu iwe unogona kuenderera kune yakasarudzika Richardplatz musha kana Klunkeranich mota paki yakachinja padenga rebhari.
2. Holesovice, Prague
Green parks, madhiri edoro nemaonero erwizi, zvemazuva ano art museum ingori mashoma e matombo akavanzika muPrague inotonhorera zvikuru nzvimbo yeHolesovice. Holesovice inogara kuCzech maartist uye vechidiki mhuri, kushandisa nguva yavo yekuzorora muLetna Park uye vachidya muma bistros mazhinji akatenderedza.
Iyo yaimbove indasitiri nzvimbo muPrague yachinja nhasi kuita inzvimbo yekugadzira yevakagadziri uye pfungwa dzekusika. saka, hazvishamisi kuti imwe yenzvimbo dzinotonhorera zvikuru muEurope inogara dzimba dzemakamuri dzinoshamisira, dhizaini yekugadzira, uye nzvimbo dzeumhizha.
3. Nzvimbo Dzinotonhorera MuEurope: Ostiense, Rome
Ostiense haisi iyo chaiyo nharaunda yeItari, asi ndizvo chaizvo zvinoisa mu 10 nzvimbo dzinotonhorera muEurope. A yaimbova fekitori yakashandurwa kuita museum museum, art yemumugwagwa panzvimbo yematsime, zvayakanakira mafi, uye 1 asiri eKaturike kumakuva uko vadetembi vane rudo Keats naShelley vakawana nzvimbo yavo yekurara nekusingaperi Ostiense yakafanana neimwewo hood.
Iyo yaimbove grey guta muguta guru reItaly ine zvishoma nezvishoma yakashandurwa ikava nzvimbo yemavara akajeka uye kugona. Uyezve, pano iwe unogona kushanyira inoshamisa Piramidhi yaCaius Cestius uye kuyemura fresco yayo, munzira yako kuenda kuEataly kune chikafu cheItaly. Kana iwe uchida kurarama senge yemuno, pekugara mune inoyevedza Ostiense yakachipa kwazvo kupfuura kumatunhu akazara ekushanya muRome.
4. Maodzanyemba Pigalle Muvakidzani Paris
Kufamba-famba pasi SoPi, kuRue des Martyrs, kumba kusvika pamusoro 200 cafes, chocolatiers, nembariro, Maodzanyemba Pigalle ndiyo iyo-nzvimbo muParis. Pamusoro peSouth Pigalle kuve yekudya kudenga, nharaunda inotonhorera ndipo paunogona kuwana inoshamisa mamuseum uye hunyanzvi. Imwe yemasimamusi akakosha zvikuru ndiyo miziyamu yeRomantic Hupenyu. Mu Musee de La Vie Romantique iwe unogona kuwedzera ruzivo rwako nezve yenguva yekudanana munhoroondo yeFrance.
Zororo kubva pakurarama kwakanaka, iwe unogona kunanga kudare rePigalle rine mavara bhasikiti. Pigalle's basketball court yakagadziridzwa, yakagadzirwa nemavara akajeka, kumutambo wakanakisa webhasikiti. Paris yakanaka zororo kuenda uye imwe yeakanyanya naka nzvimbo dzezororo dzine matare makuru ebasketball muEurope.
5. Nzvimbo Dzinotonhorera MuEurope: Arbat, Moscow
Iyo inovara uye inonakidza Arbat nharaunda iri nyowani yekufema mweya mukati muzere vanhu guta reMoscow. Iwe uchawana Arbat izere nerunako, nezvivakwa zvine mavara, cafes, uye unyanzvi mumugwagwa. Sezvaunofamba uchitevedza Arbat, iwe uchawana mweya weguta rine vanhu vazhinji. Mugwagwa unozivikanwa weOld Arbat uri munhoroondo yeArbat Quarter muMoscow yakachengetedza kukosha kwayo senzvimbo yekutengesa, kubva muzana ramakore rechi15.
Mazuvano, iyo Arbat nharaunda izere nechic boutiques, zvitoro zvekuyeuchidza, mhizha, uye zvimwe zvakawanda pfuma. Pamusoro pe, nepo nzvimbo ino iri yekushanya kwazvo, iwe uchaiwana yakadzikira, uye zvinoyevedza. Kuti unakidzwe nezvakanakisa zveArbat, pini pasi mazuva mashoma murwendo rwako rweMoscow, zvisingapfuure. Nenzira iyi, unogona kutsvaga zvakanakisa zveMoscow uye runako rweimwe nzvimbo dzinoshamisa kwazvo dzekushanyira muRussia.
6. 7th Dunhu Budapest
Mudiki uye unonakidza, Dunhu rechinomwe muBudapest inzvimbo inoshamisa kune vafambi. Mabhawa makuru, dzimba dzakanakisa dzekutiza muBudapest, musika wemanheru, uye zviitiko zvetsika, ino nharaunda inogara ichingopopota, nenzira yakanaka. Iyi nharaunda inotonhorera zvakare iri kota yechiJuda muBudapest, saka unogona kushanyira sinagogi guru, chiratidzo chakazvimirira choga.
Uyezve, migwagwa yekare yakave ivhu rakaorera rekumutsiridzwa kwetsika dzeHungary. Mukuwedzera kune maresitorendi uye zvitoro, kukwezva kukuru mu 7th dunhu ndiyo matongo mabara. Kupemberera muchato weshamwari yako yepamwoyo, kana bash yekuzvarwa mune yekare quirky bar chiitiko chakakosha chete kunzvimbo inotonhorera yeBudapest.
7. Nzvimbo Dzinotonhorera MuEurope: Langstrasse Zurich
Inoturikirwa semugwagwa murefu kwazvo, Nharaunda yeLangstrasse muZurich inoputsa zvese zvaunoziva nezve nyika inobata nguva. Langstrasse mukomana akaipa waZurich, hudyu, zvarisingazivi, ine yakajeka neon mwenje uye inogara yakagadzirira kupati. Langtrasse inenzvimbo dzekudyira mazing, nembariro, uye makirabhu ehusiku, tora zvako.
Uyezve, iyo inotonhorera nharaunda imwe ye nzvimbo dzakanaka dzeLBBT muEurope. Pano iwe unogona kuwana yako groove pane iyo LGBT-inoshamwaridzika Les Garcons bar / pizza nzvimbo, semuyenzaniso. Kupedza, ino nharaunda inoshamisa haawanzo kurara uye ichakupa iwe mune ayo mazhinji emadzinza maresitorendi, mapato, uye mushure-mapato echokwadi.
Nzvimbo huru dzegirini, yakanaka akitekicha, uye musha unofadza, Amsterdam-Noord yawana zvese. Nzvimbo inotonhorera iri mhiri kwerwizi IJ, saka Noords inopa zvinoshamisa pikiniki mavara uye rarama mimhanzi gigs nzvimbo. Kuwedzera kune ese aya mazango, Amsterdam-Noord iri kumba kwekumusoro kwepamusoro muEurope, kune vanoda adrenaline.
zvisinei, kana uri kuronga zvimwe kushingaira kwezororo ipapo rwizi rwakakwanira zviitiko zvekunze. Kuchovha bhasikoro, achimhanya, uye kunyange kufamba nechikepe, Rwizi IJ rwakakwana. Chinokosha ndechekuti Amsterdam-Noord inyika diki yeDutch mukati meguta rakanaka reAmsterdam. Sarudzo hadziperi, uye mhepo inonakidza, hazvishamise vafambi vanoramba vachidzoka kune imwe yenzvimbo dzinotonhora kwazvo muEurope.
9. Nzvimbo Dzinotonhorera MuEurope: Shoreditch London
Vazhinji vafambi vanoziva Shoreditch Kutenda kune inonakidza Brick Lane musika. zvisinei, Shoreditch ndiyo nzvimbo yakanakisa yekuenda kunotenga imwe-ye-a-mhando zvidimbu mumahombekombe makuru akazvimirira. Uyu unongova mumwe muenzaniso wemativi akasarudzika enharaunda yegrafiti. Shoreditch inogona kunge isingave mufananidzo-wakakwana, asi zvirokwazvo ine mweya wayo wega.
Chaizvoizvo nekuti Shoreditch haisi iyo chaiyo yechinyakare yeChirungu nharaunda, rave musha wevanyori vemuno. Pamusoro pe, iyi nharaunda yemaguta ndiyo nzvimbo yakanakisa yekuyedza chikafu chemumugwagwa pamusika kana pop-ups, bata firimu padenga remba mabhaisikopo uye tsvaga yakavanzika emadziro art kukona kona. Kupedza, Unhu hunokosha hwaShoreditch hunoita kuti ive nzvimbo inotonhorera zvikuru muLondon.
10. Wakawana, Scotland
Pamahombekombe akanaka eScotland nemaonero egungwa reAtlantic, Findhorn mashiripiti. Ipo iri muMorayshire, vamwe vanozviti kugadzirisa, panzvimbo pekugara munharaunda mumaguta. Findhorn inonakidza nzvimbo yezororo, kunyanya zororo regungwa kuenda. pano, iwe unowana mikana mikuru yemitambo yemvura inonakidza kana kuzorora pamhenderekedzo.
Uyezve, Findhorn ine inoshamisa eco-musha, uye kufamba kwekutandara kune fashoni chaizvo mazuva ano. Iri divi rakasvibirira rinowedzera fashoni vibe kunzvimbo yakasununguka, pamwe chete nenzvimbo huru nemhepo.
11. Nzvimbo Dzinotonhorera MuEurope: Vesterbro, Copenhagen
Chero ani anogara muVesterbro achati iyi nharaunda inotonhorera ine nharaunda diki diki dzakasiyana mukati maro. Mumwe mudiki, kunyengera, uye kamwe cheCopenhagen dzvuku mwenje dunhu uye imwe yacho ine chiFrench chic nezvazvo. Vesterbro izere nemusiyano, saka chero munhu anoshanyira Copenhagen kekutanga anowana chimwe chinhu chakakura chavanofarira.
Nemamwe mashoko, Vesterbro ndeimwe yenzvimbo dzinotonhorera muEurope nekuti ine chimwe chinhu chinoshamisa chekupa kune wese munhu. Kubva pane nzvimbo dzakasvibirira kusvika kumaresitorendi akanaka, chic boutiques, uye imba yemunharaunda yeAssalon kwaunogona kudya nevanhu veko, Nharaunda yeVesterbro inogamuchira uye iri nyore. saka, hazvishamise kuti Vestrbro iri kumusoro 10 inotonhorera nharaunda muEurope gore rega.
Iyo yakanyanya fashoni nharaunda muMilan, Porta Venezia anogamuchira Milan yeFashoni Svondo uye anovhara ne bang kumusoro 12 nzvimbo dzinotonhorera muEurope. Art, Chikafu cheItaly, kukona kona kubva kunzvimbo dzakanakisa dzekutenga muMilan, asi yakadzoserwa Porta Venezia idiki Italy, kure nenzvimbo ine vanhu vakawanda yekushanya.
Port Venezia inozvirumbidza dzimba dzimba-dzakatendeuka mifananidzo, cafes, nemapindu, senge inoshamisa Giardini Publici. Chimbo chikuru chePorta Venezia chinokwezva veko, expats, uye vafambi kutandara, sangana, uye pati panguva yeMilan Gay parade, uye mazuva ese kusvika ipapo. saka, kana uri kuronga a vhiki kupera muMilan, zvirinani kuzviita vhiki refu, zvisingapfuure.
Isu tiri Save A Train uchafara kukubatsira kuronga rwendo kuenda ku 12 nzvimbo dzinotonhorera muEurope.
Iwe unoda here kupinza yedu blog positi "12 Inotonhorera Vavakidzani MuEurope" kune yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsn%2Fcoolest-neighborhoods-europe%2F - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
cool coolestneighborhoodsEurope CoolNeighborhoods hudyu Neighborhoods Trendyneighborhoodseurope
Rovedza Kufamba Austria, Train Travel Czech Republic, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Train Travel Holland, Chitima Kufamba Hungary, Chitima Kufamba Switzerland, Train Travel The Netherlands, Travel Europe